Qoysas hal mar maalintii wax cuna Covid-19 awgii | KEYDMEDIA ONLINE
Qoysas hal mar maalintii wax cuna Covid-19 awgii
UN OCHA waxay sheegtay in qoysaska aysan haysan wax dhaqaale ah oo cunto ku iibsan karaan.
MUQDISHO, Soomalaiya - 'COVID-19' wuxuu sababay cunno yari soo foodsaartay Soomaaliya illaa heer qoysas badani ay cunaan oo keliya hal jeer maalintii, sida ay sheegtay hay'adda Qaramada Midoobay Arbacadii shalay.
Dhiibaato dhaqaale ee ka dhashay Covid-19, ayaa fara ba'an ku haya Soomaaliya oo tan iyo sanadkii tagey ku dilay dad kor u dhaafaya 260 qof, iyadoo uu ku dhawacay ku dhawaan 8,000, oo badankooda ku nool Muqdisho.
"Bisha August 2021, ku dhowaad 850,000 oo caruur ah oo da'doodu ka yar tahay 5 sano ayaa la filayaa inay nafaqo darro ba'an ku dhacdo," Xafiiska UN-ka ee Isku-duwidda Hawlaha Bani'aadamnimada (UN OCHA) ayaa ku yiri barta Twitter-ka, isagoo soo xiganaya warbixin ay soo saareen guddiga Gurmadka Musiibooyinka.
Waxay hay'adda OCHA inataas ku dartay hadalkeeda: "Qoysas badan ayaa cuni kara hal mar maalintiiba sababo la xiriira cunno yarida ka dhalatay dhibaatada dhaqaale ee uu sababay Covid-19".
Tani waxay u badan tahay inay u horseedo xaaladda caafimaad ee dadka saboolka ah inay ka sii darto, iyadoo ay sii kordhayaan xaaladaha nafaqo-darrada ee caruurta shan jirka ka yar.
Amni darrada daba dheeraatay ee Soomaaliya iyo masiibooyinka dabiiciga ah ee soo noqnoqda ayaa sababay in dalka uu noqdo mid kamid ah wadamada ugu nugul adduunka, ayay raacisay OCHA hadalkeeda.
Bishii la soo dhaafay, dowladda Soomaaliya iyo QM waxay billaabeen dadaal ay ku uruurinayaan in ka badan 1 bilyan oo doolar si loogu caawiyo dadka Soomaaliyeed ee u baahan gargaarka bani'aadamnimo sannadkan.
Qorshaha Kajawaabida baahidda bani’aadamnimada ee 2021 waxuu ujeedkiisu yahay in lagu caawiyo 4 milyan oo qof oo ka mid ah 5.9 milyan ee u baahan gargaarka, oo ay ku jiraan dadka gudaha ku barakacay, qaxootiga Syria, Yemen, iyo dadka soo noqday.